Intlanzi yeBetta, yonke into onetyala kuyo: bahlala ixesha elingakanani, inkathalo, ukuzala kwakhona | | Ngeentlanzi
Intlanzi yeBetta, yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga nabo
Kwilizwe leentlanzi kunye neendawo zasemanzini kukho ezomtsalane kakhulu ngenxa yombala wazo oqaqambileyo kunye namaphiko azo awodwa. Intlanzi eneentlobo ngeentlobo zeemilo kunye neempawu ezizodwa ekufuneka uzazi.
Kule meko, sithetha ngeNtlanzi yaseBetta. Intlanzi eyaziwayo ngemibala yayo eqaqambileyo nebonakalisayo, eyaziwa ngokuba yiSiamese ilwa nentlanzi kunye nokuba ndlongondlongo eyindoda inenye intlanzi ye-betta. Ngaba uyafuna ukwazi yonke into ngezi ntlanzi?
1 Imvelaphi yeBetta Fish
2 Ngubani igama elithi Betta?
3 Ukutya okuthandayo kukaBettas
4 Iindidi zentlanzi yaseBetta
5 Ukuzaliswa kweentlanzi ze-betta
6 Zeziphi iimeko ze-Aquarium eziBalaseleyo kwiBhettas?
7 Iimpawu zokwazi ukuba intlanzi yaseBetta isempilweni
8 Iimpawu ezisixelela ukuba kukho into engalunganga
9 Umahluko phakathi kwendoda nebhinqa
10 Uyinyamekela njani intlanzi yaseBetta
10.1 Indawo yokuhlala
10.2 Ubungakanani beHabitat kunye nokuhambelana
10.3 Izixhobo zetanki yentlanzi yaseBetta
Imvelaphi yeBetta Fish
Imvelaphi yeentlanzi ze-betta inokulandelwa okokuqala kwi-Southeast Asia. Babenendawo zabo zokuhlala kwiindawo ezinjengemasimi erayisi, imisele esetyenziselwa ukuhambisa amanzi, nakwamanye amadama kwimimandla efudumeleyo yezandyondyo. Ezi ntlanzi ziye zathwaxwa ziinkqwithela, izikhukula kunye nesomiso esitshabalalisayo kwaye baye bakwazi ukwenza iindlela ezothusayo zibenza bakwazi ukuhlala phantse kuyo nayiphi na imeko.
Olunye lweempawu oluye lwaluqulunqa ukuze luqhelane kakuhle nobume obuqatha yile bakwazi ukuphefumla ioksijini ngokuthe ngqo ukusuka emoyeni ngokuyihambisa kwiigilizi zabo. Ayibobuchule obuqhubekayo, kodwa inokuphila ixesha elifutshane emanzini. Kwimeko yokufumana isixa esincinci samanzi esijikelezileyo, ngokuhlala kufumile, iyakwazi ukungenisa umoya oyijikelezileyo. Ke ngoko, sifumana iintlanzi ezikwaziyo ukuphila nakweyiphi na imeko, nokuba zinamanzi amancinci.
Nangona iintlanzi ze-betta zinokuphila kwiindawo ezincinci nasemanzini engekho mgangathweni, ziqhuba kakuhle kwiindawo ezincinci zasemanzini. Ukuze baphile kakuhle kwaye babenomgangatho wobomi obulungileyo, kufuneka sinikeze utshintsho rhoqo emanzini. Yintoni egqithisile, Obona bushushu bukhulu bokukhula kunye nophuhliso buphakathi kwama-24 nama-27 degrees.
Ngubani igama elithi Betta?
Kukho igama lendlu yamagorha yamandulo ebizwa ngokuba yiBettah. Ezi ntlanzi, njengoko kuchaziwe ngaphambili, zinobundlobongela kwaye zilwela ukulwa. Ngesi sizathu, egameni lale ndlu yamagorha, banikwe eli gama, kuba ukuloba iintlanzi nako kwathandwa phakathi kwinkulungwane ye-XNUMX. Lo mdlalo wokulwa kweentlanzi waba nodumo eThailand kangangokuba ukumkani wangaphambili weSiam wayilawula ngokusemthethweni. Nangona kunjalo, umlo weentlanzi awuzange uvandlakanywe ngokuphumelela kwenye okanye enye okanye ngomonakalo owenziwe yintlanzi kwenye, kodwa ngobukhalipha obufanayo.
Ukutya okuthandayo kukaBettas
I-Bettas zinomlomo oguqulweyo kwaye zihlala zondla phezu kwamanzi. Kuba bayakwazi ukuphefumla ixesha elifutshane bephuma emanzini, aboyiki ukusondela kumphezulu.
Phakathi kokutya okulungele ngokufanelekileyo ukutya kwakho, sifumana kunye neentshulube zegazi ezomileyo (uhlobo lweentshulube), brine shrimp okanye idaphnia. Ukutya okuthengiswayo kweBettas zingcono kuba zidibanisa ezi zinto zintathu zokutya kwaye njengezongezo zongeza iivithamini kunye neeminerals. Inyaniso yokuba iintlanzi zeBetta zitya ezi ntlobo zokutya zenza ukuba umbala ukhanye ngakumbi kwaye ubonakale ngakumbi, ukuthetha ngokwandisa ixesha elide leBetta.
Kukho intsomi yokuba iinyibiba zoxolo okanye iingcambu zezityalo ezikhule kwindawo yeentlanzi zeBetta zinokutya kubo. Kodwa le yintsomi nje, kuba uBettas azinakuphila kwiingcambu zezityalo. Oku kwenzeka ngenxa yokuba i-Bettas ifuna ukutya okune-protein ne-fiber.
Iindidi zentlanzi yaseBetta
Kukho iintlobo ezininzi zeentlanzi ze-betta. Ziyi-phenotypes ezahlukeneyo zohlobo olunye. Ezinye zeentlobo ezixabisekileyo ze-betta splendens zezi:
Isithsaba se-betta fish: lutshintsho olwenza umsila kunye namaphiko alo abe nemingxunya, efana nokumila kwemilomo yesithsaba.
I-Betta cooper intlanzi ibonakaliswe ngemibala yayo ekhethekileyo. Inombala omnyama, obonisa ukukhanya ngeetoni zentsimbi. Kungoko igama layo, kuba "ubambiswano" lithetha ubhedu.
Intlanzi yentlanzi yaseBetta ibonakaliswe kwisikali esikhethekileyo. Izikali zayo zinkulu, ngakumbi zibonisa ukukhanya ngokwahlukileyo, zikhupha ukukhanya okufana nokumhlophe.
Intlanzi ye-betta yecrown
Iintlanzi zebetta yenyoka
Emva kwexesha, abanye abalimi bakhulisa iintlanzi ezineempawu ezininzi kwisampulu enye, ke sele kukho iintlanzi Inamba emnyama emnyama okanye inamba ebomvu.
I-Betta Black Cooper Intlanzi
Ngokubhekisele ekuveliseni kwakhona kuya kufuneka yongeza ubulembu kuyo ukuze batye kwaye bakhe indlwane. Singabeka ikomityi yeplastiki. Indoda nenkazana mabazane, Ngaphandle koko, ukuba sibeka umntu obhinqileyo ngaphandle kwendoda engamaziyo, uya kumphatha njengomngeneleli kwaye amhlasele. Ngenxa yoku kufuneka sahlule i-aquarium kusetyenziswa iplastiki okanye iglasi ukuze ibonwe ngaphandle kokuchukumisa.
Xa inkunzi isenza indlwane ngee moss kwaye siyabona ukuba umntu obhinqileyo uyayamkela into yokuba ufuna ukushiya imeko yakhe, lixesha lokuba zidibanise. Indoda iyakuthatha ixesha ukuyifuna, kodwa ke iya kubeka amaphiko ayo kwindawo yokuwola kwaye kwimizuzu embalwa iyakumithisa umntu obhinqileyo. Izakubeka amaqanda esidlekeni ishiye. Umfazi kufuneka abuyiselwe kwenye i-aquarium, kuba indoda inokuba ndlongondlongo.
Zeziphi iimeko ze-Aquarium eziBalaseleyo kwiBhettas?
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-Bettas yintlanzi enobundlobongela kwaye ayizukuthandabuza ukulwa. Ngaphandle kwesini, iintlanzi zeBetta ziqala ukulwa phantse ngalo mzuzu wonxibelelwano. Nangona ngokubanzi, i-Bettas zikhetha ukudada zodwa kwaye zikhetha indawo elungileyo apho zikhululekile kwaye zinokuzimela. Las imiqolomba yamanzi okanye iikona ezixineneyo nezityalwayo basebenza kakuhle ukwenza iBetta izive ikhuselekile.
Ngokumalunga nomgangatho wamanzi, kufuneka kuqinisekiswe ukuba sisinye kwisithathu samanzi esisuswe ngalo lonke ixesha xa kufakwa esitsha. Oku kuvumela iintlanzi ukuba zilungelelanise iqondo lobushushu kunye ne-pH yamanzi acocekileyo kwaye ziqhelanise kwaye ziqhelane nokusingqongileyo. Amanzi kufuneka atshintshwe rhoqo emva kweentsuku ezintathu okanye ezine amatanki amancinci ukuze angatshintshi ibhalansi yendalo yommandla wentlanzi. Kuya kufuneka ulinganise amanqanaba e-chlorine kakuhle kwaye ukuba kuyabonakala ukuba inezinga eliphezulu, kuya kufuneka wongeze ithontsi le-dechlorinator emanzini etephu ngaphambi kokuyifaka etankini. Nokuba isepha okanye isibulali zintsholongwane akufuneki sisetyenziselwe ukucoca izihombiso, kuba oko kuya kuyonakalisa impilo yentlanzi. Ukucoca izihombiso kungcono ukusebenzisa amanzi ashushu.
Iimpawu zokwazi ukuba intlanzi yaseBetta isempilweni
Xa sinentlanzi yaseBetta kwi-aquarium yethu kufuneka sithathele ingqalelo izinto ezininzi eziza kubonisa ukuba impilo kunye neemeko zokuphila kwentlanzi zanele. Into yokuqala ekufuneka sijonge kuyo kukuba ingaba intlanzi iyasebenza kwaye iphaphile. Ukuba siyabona ukuba uyasabela kakuhle kwisikhuthazo, kungenxa yokuba akondlekanga okanye akasemgangathweni. Kuya kufuneka siyiqaphele loo nto yitya rhoqo. Ukuba uphendula ngolunya kwisikhuthazo sangaphandle, intlanzi ikwimeko efanelekileyo. Ngokubhekisele kwinkangeleko, kwindoda inokusebenza njengesalathiso sempilo entle yokuba imibala yayo yomelele kwaye idlamkile.
Ukuze iintlanzi zethu zeBetta zibe sempilweni, kufuneka siziphephe iimeko ze ingxinano. Ezi meko zezona zinto zibangela uxinzelelo kunye nokugula. Ukwenza oku, kufuneka sigcine umgangatho wamanzi olungileyo, notshintsho rhoqo kunye nohluzo olwaneleyo.
Iimpawu ezisixelela ukuba kukho into engalunganga
Njengokuba kukho izikhombisi zempilo entle yentlanzi, kukwakho nezalathi zokujonga ukuba akukho nto siyenzayo eyiyo na. Into yokuqala kukuba imibala ayikhanyisi kangako okanye ayityi rhoqo. Singajonga kwakhona:
Amabala okanye ukungunda emzimbeni okanye emlonyeni
Amaphiko aqhekekile ngokungaqhelekanga
Umahluko phakathi kwendoda nebhinqa
Intlanzi eyindoda yaseBetta inomzimba omde kunowasetyhini. Ukongeza, inamaphiko amakhulu kunalawo obhinqileyo kwaye inemibala ngakumbi. Nangona kunjalo, iintlanzi zeBetta zinazo Ukwahluka ngakumbi kwemibala kuwo wonke umzimba. Omnye umahluko omkhulu kukuba ndlongondlongo. Indoda inengcwangu ngakumbi kunowasetyhini kwaye ayinakho ukuhlala nenye intlanzi eyindoda ngaphandle kokulwa. Abafazi banokuhlala kunye ukuya kuthi ga kwi-5 ngaphandle kokukhuphisana.
Ngokukhathalela, iintlanzi zaseBetta zihlala phakathi kweminyaka emine okanye emihlanu kwaye azinakubakho kwiindawo ezincinci kakhulu ngaphandle kokuba amanzi atshintshiwe ubuncinci kabini ngeveki. Kwimeko yamadoda, bangcono ngokuqubha kumanzi azolileyo, angenacocwanga.
Uyinyamekela njani intlanzi yaseBetta
Iintlanzi zeBetta ngokubanzi zichasene kakhulu kwaye kulula ukuzinyamekela.
Ukuba uyazibuza ukuba ihlala ixesha elingakanani ibetta fish, rhoqo ngaphezulu kweminyaka emithathu ukuba imeko eyaneleyo yokutya namanzi iyagcinwa. Ukuba ukhathalelwe ngokuchanekileyo, iintlanzi zakho zeBetta ziya kuhlala ziphilile, zinemibala kwaye ziyavuya ixesha elide.
Abantu abaninzi abaneentlanzi zeBetta kwaye bayazi ukuba banako ukuhlala emanzini angenzulu, bagcina iintlanzi zabo kwizitya ezincinane. Nangona kunjalo, iimeko ezifanelekileyo apho Iintlanzi zikhula kakuhle emanzini ashushu kunye namanzi anzulu. Ukuba ubushushu bechibi buyehla bungaphantsi kwe-22 degrees okanye kunjalo, iintlanzi ziya kugula. Obona bushushu bumalunga nama-26 degrees ukuze zikhululeke ngakumbi kwaye zingathathi cala okanye i-pH ene-asidi (6,5 ubukhulu becala).
Ngale nto, sicebisa ukuba unazo ezinye Isifudumezi se-aquarium kunye inqanaba lomgangatho wamanzi Ukuqinisekisa ngamaxesha onke ukuba iimeko zamanzi zilungele iintlanzi iBetta.
Ubungakanani beHabitat kunye nokuhambelana
Nangona i-Bettas iyintlanzi enobundlobongela, oko akuthethi ukuba kufuneka bahlale bodwa. Ewe kuyinyani ukuba intlanzi eyindoda yeBetta ibhetele kakhulu xa inguye kuphela uBetta etankini. Amadoda athanda ukulwa nezinye ii-bettas zesini. Kodwa ungongeza eyindoda enye kwitanki yoluntu kunye nezinye iintlobo zentlanzi ezingekho ndlongondlongo. Kwelinye icala, ukuya kuthi ga kubabhinqileyo ababhinqileyo abahlanu banokugcinwa kunye ngemvisiswano etankini.
Ingxaki yokulwa neentlanzi iqala xa kubekwa amadoda amabini kwitanki enye okanye xa indoda eyindoda ikwitanki loluntu nezinye iintlanzi ezinobundlobongela. Kufuneka sikuthathele ingqalelo oko akufuneki sigcine i-betta fish nezinye iintlanzi ezimibalabala, kuba ezi zinokuyibhidisa kunye nezinye i-Bettas kwaye zibahlasele.
Izixhobo zetanki yentlanzi yaseBetta
I-Bettas iyathanda ukuba neendawo zokuzimela, ngakumbi abantu ababhinqileyo. Yenzelwe yona kufuneka siphumeze ezimbalwa iindawo zokuzifihla ukuze bahlale bonwabile. Ukuba ufuna ukongeza izityalo, kungcono uphile izityalo zendalo okanye ezo zenzelwe iBettas kuphela. Izityalo zeplastiki eziqhelekileyo zingonakalisa amaphiko entlanzi.
Banokuphila ngaphandle kwempompo yomoya, ngokungafaniyo nezinye iintlanzi. Nangona kungcono ukuba itanki inomoya. I-Betta aquariums kufuneka ibeneqweqwe lolunye uhlobo ukuthintela ukuba iintlanzi zingatsiba. Itanki kufuneka lingazaliswa ngaphezulu kweepesenti ezingama-80. Kuba xa ezi ntlanzi zinemincili, zingatsiba emanzini. Ngamanye amaxesha bayenza ibe phezulu njengee-intshi ezintathu ngaphezulu komphezulu.
Okokugqibela, amaxabiso entlanzi eBetta ayahluka phakathi I-5 euro kunye ne-15 €. Eyona nto inemibala kwaye inkulu, iyabiza kakhulu. I-Betta fry ithengiswa nge-1 euro.
Njengoko ubona, ezi ntlanzi zinokuba nobundlobongela kwaye zilwe, kodwa zonke ziyamangalisa kwaye kulula ukuzinyamekela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yeBetta, yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga nabo
UVictor ramos sitsho
Ukujonga ngononophelo kwintlanzi yethu ye-betta, ndinamathandabuzo amaninzi endikucela ukuba undixhase ... Uyazi ukuba ndingumntu wakho? Uyavuya ukundibona? Uyazi ukuba ndiyakondla? Ngaba uziva incasa okanye iimvakalelo zalo naluphi na uhlobo Uyakuqaphela ukungabikho kwethu?
Phendula uVictor Ramos
Mhlobo othandekayo, enkosi kakhulu ngolwazi lwakho, waseMexico ndiyavuyisana nawe ngale ndawo inomdla endindwendwela rhoqo;
Ngokubhekisele kwezi ntlanzi, zintle kakhulu, ngelishwa ngamanye amaxesha zinikwa njengezipho kwaye ngokungathi yinto yokudlala, kuba ziyintlanzi ezinamandla kakhulu kwaye ziyakwazi ukuziqhelanisa neemeko ezininzi ezifanelwe yimbeko yethu.
Ukuwola kwaye ndiza kuqhubeka nokutyelela iintlanzi rhoqo.
Ndinentlanzi eliligorha kwaye ukuba kuyinyani ukuba bayamelana kakhulu, into ehlwempuzekileyo yadlula kuthotho lwezinto kwaye iselapha kum, yintlanzi entle kwaye ngoku ndifunda yonke le ngcaciso qonda izinto ezininzi. Enkosi
UIsake valderrabano sitsho
Molo, enkosi kakhulu ngeposi.
Kubhejwe ii-bettas ezimbini kukuswela ulwazi kwaye ngempazamo bacinga ukuba abadingi ndawo
Phendula u-Isaac Valderrabano
URuben Diaz sitsho
Enkosi ngolwazi, gqibezela. Indincedile ukulungelelanisa i-betta fish yam kwaye ndiyinike ingqwalaselo eyifunayo. Ukubulisa.
Phendula uRuben Diaz
Kwiveki ephelileyo ndafumana intlanzi entle eblue blue. Ndiye ndambhaptiza "Luhlaza." Ndifuna ukubeka amabhinqa amathathu kodwa itanki ziilitha ezisibhozo, kwaye ndiyazibuza ukuba azizukuba mxinwa kakhulu.
Kwaye omnye umbuzo: Athini la maqamza ayenzileyo phezu kwamanzi? Khange ndihlambe itanki leentlanzi ngesepha kwaye andiqondi ukuba inokuba yintoni. Zijolise kwimiphetho netanki leentlanzi.
USusana fklttá sitsho
Ibhetta fish yam isweleke nje, andazi kwenzekeni, ebephephezela amagwebu ngaphezulu kwaye ebephilile kodwa emzuzwini wandenza ndamtyisa ndaqaphela ukuba akashukumi kwavela ukuba ubhubhile. .
Phendula uSusana fklttá
Umjikelo wobomi omangalisayo wesalmon